अभिनेत्री श्रेष्ठ यतिबेला ‘जाइरा’ को प्रचारमा, कस्तो होला फिल्म ? - radionrn.com
अभिनेत्री श्रेष्ठ यतिबेला ‘जाइरा’ को प्रचारमा, कस्तो होला फिल्म ?
काठमाडौं । अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ यतिबेला फिल्म ‘जाइरा’ को प्रचारमा खुलेर लागेकी छिन् । यसअघि उनको अभिनय रहेको फिल्म ‘प्रसाद’ प्रदर्शनमा आएको थियो । फिल्मबाट उनले राम्रो तारिफ बटुलिन् । त्यसो त नम्रतालाई दमदार अभिनय गर्ने नायिकाका रुपमा पनि लिने गरिन्छ ।
नम्रतालाई दर्शकले एक कुशल ‘लभर गर्ल’ का रुपमा चिनेका छन् । उनले अभिनय गरेका प्रायः फिल्ममा नम्रतालाई चोखो प्रेम गर्ने युवतीका रुपमा देख्न सकिन्छ । त्यसैले पनि धेरैले नम्रतालाई लभर गर्लका रुपमा बढी देख्न चाहन्छन् ।तर, नम्रता भने आफूलाई दर्शकले लभर गर्लका रुपमा मात्र नचिनेर सबै विधामा अभिनय गर्न सक्ने नायिकाका रुपमा छाप परोस् भन्ने चाहन्छिन् ।
आफ्नो फरक भूमिकामा काम गर्ने सपना पूरा गर्नका लागि नै यो फिल्ममा लगानी गरेको बताउने नम्रता ‘जाइरा’ मा एक्सन अवतारमा देखिँदैछिन् । टिजर र ट्रेलरमा नम्रताको लूक देखाइएको छ । यही फिल्मका लागि उनले कपाल समेत छोटो बनाएकी थिइन् । उनको कामको तारिफ पनि गरिएको छ ।
तर, उनले बनाएको लभर गर्लको छाप छोड्न यही एउटा फिल्म काफी नहुन पनि सक्छ । किनकि, उनका जति पनि हिट फिल्म छन्, ती प्राय प्रेमकथामा नै आधारित छन् । भोलि शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘जाइरा’ नम्रताका कारण त चर्चामा छ तर यो फिल्मबाट उनले कस्तो प्रतिक्रिया पाउने छिन्, त्यसका लागि भने केही दिन कुर्नुपर्ने छ । फिल्मबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाउनेमा उनी भने ढुक्कजस्तै देखिन्छिन् ।